Nongedzo kune itsva SEO uye SEM maitiro emabhizimusi epamhepo | ECommerce nhau
ECommerce nhau | | SEM, SEO
Kune chero bhizinesi repamhepo zvakakosha kuti uve neiyo yakanaka SEO uye SEM yekumisikidza kuitira kuti uve nekuvapo kukuru pawebhu. Nekudaro, kunyangwe zvese zviri zviviri zvakakosha kana zvasvika pakuonekwa painternet, pane misiyano yakakosha pakati pavo. Nekudaro, nepo SEO (Yekutsvaga Injini Kugonesa) iri iro rairo rinotarisira gonesa kumisikidzwa kwewebhusaiti mune dzekutsvaga injini, SEM (Kutsvaga Injini Kushambadzira) zano rakanangana nekuwana chinzvimbo chakatarwa kuburikidza akabhadhara kushambadzira kutumira.
Neichi chikonzero, zvichipiwa kukosha kwayo, mamwe masangano akasarudzika gore rega anoongorora maitiro muSEO uye SEM. Iyi ndiyo mamiriro, semuenzaniso, eStudio34, iyo ichangoburitsa nzira SEO uye SEM mafambiro ekutungamira e2020.
1 SEO maitiro e2020
2 SEM maitiro e2020
SEO maitiro e2020
La SEO maitiro gwara re2020 inosimbisa, nenzira iyi, mamwe ma masimba echirango ichi kutarisira gore rinotevera. Nekudaro, chekutanga pane zvese, gwaro rinoratidzira kukosha kwekushandisa data rakarongedzwa kuti utore mukana wekutsvaga kusingabatike, kwakanangana zvakananga nemibvunzo yemushandisi inogadzirwa nezwi.
Uye zvakare, iyo gwara inosimbisawo kudiwa kwe gadzira zvemukati zvemukati kuitira kuti ubatsirwe nebasa chairo realgorithm yemuno. Neichi chikonzero, iwo mutungamiri anokurudzira kuita zvakanyanyisa enzvimbo dzekutsvaga enjini. Saizvozvowo, bhuku racho rinosimbisawo kukosha kwekutora dhata kuitira kuti uzive izvo zvinodiwa nezvinodiwa zvevangangove vatengi, zvichibva mukuitwa kwesemantic zvidzidzo.
Saizvozvowo, mutungamiri anokurudzirawo kushandiswa kwechigadziro chekushandisa yakawanda yedata. Nekudaro, iri bhuku rinokurudzira kushandiswa kweJupyter: chiridzwa chinotendera gadzira huwandu hukuru hwemaitiro yakabatana nedata manejimendi.
Saizvozvowo, Mimwe miitiro irimo mugwara inoenderana nekuvandudza kutaurirana nevatengi panguva yekutenga maitiro uye kushandiswa kwehunhu hwehunyanzvi hwekuita sarudzo.
SEM maitiro e2020
In the SEM mafambiro ekutungamira e2020 pane kutaura, pakati pezvimwe zvinhu, zve Machine Learning, iyo inogonesa kugadzirwa uye kuitiswa kwe100% otomatiki kushambadzira mishandirapamwe. Nenzira imwecheteyo, iyo SEM mafambiro ekuperekedza inosanganisirawo mamwe makuru enhau eGoogle Ads e2020. Nekudaro, maererano negwara pacharo, izvi zvigadziriso zvinonyanya kuve mune yakakura otomatiki uye mune matsva ekugadzira mafomati.
Nenzira imwecheteyo, iyo gwara rinosanganisa zvimwe zvitsva mumunda weSEM zvine chekuita nedanho rekushandisa uye yekushandisa njere yekushandisa. Saizvozvowo, zvakare inonongedzera pakuonekwa kwemafomati matsva emushandirapamwe senge kushambadzira kwegalari, Discovery mishandirapamwe uye kuwedzeredzwa nemafomu ekutungamira Ese iwo mafomati matsva ayo achawedzera kugona kwekusvika uye kushanda kwemushandirapamwe wekushambadzira wakagadzirwa nemabhizinesi akasiyana kuburikidza neInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Nongedzo kune itsva SEO uye SEM maitiro emabhizimusi epamhepo